Pascal Campion dia fanoharana mahatalanjona amin'ny fiainana andavan'andro | Famoronana an-tserasera
Raha i Sorolla no tompon'ny hazavana, dia satria izy no nisambotra izany tamin'ny fomba tsara indrindra hitondrana ny atmosfera amin'ireo fotoana manokana ireo tamin'ny androny. Manakaiky ireo fifandonana ireo ny Pasion Campion hitondra antsika freshness lehibe sy sary miloko fientanam-po be ary fiainana isan'andro.
Mpanazava izay mandeha isan'andro mba haka sary an-tsaina ireo seho lojika indrindra tamin'izany andro izay mamerimberina ny andro izany ary tsy misy sisa tavela afa-tsy ny mandeha mamaky lakozia, mandany fotoana miaraka amin'ny fianakaviana na mihaona amin'ilay olon-tiana malalantsika; avia, ny fototry ny atao hoe olombelona ary inona, ambonin'izany rehetra izany, sarotra kokoa ny manatratra azy (¿?).
Ny zavatra mahatsikaiky momba an'i Campion dia izany ampiasao ny iPad-nao mba hamoronana an'ireto fanoharana mahafinaritra ireto izay mitaona aingam-panahy avy amin'ny fianakavianao. Ny vadiny sy ny zanany vavy no mpilalao fototra ao anaty sary iray izay misy dikany betsaka.
Ny zavatra mahaliana amin'ny fanoharany dia ny fampiasana lamba ary satria ny loko dia mirindra tsara mifanaraka amin'ireo alokaloka rehetra itondrany azy; zava-misy izay tsy mora tratrarina ary miaraka amin'ny iPad dia ahafahantsika mahita tsipika mivantana tsy misy fanampiana fanampiny.
Pascal koa dia sahy maka tahaka ireo seho izay ovay amin'ny fomba mahery vaika ny fotoana ary isa-minitra ny andro raha avy ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny alina. Mpana sary iray izay afaka manantitrantitra amin'ireo fijery ireo izay mitady zavatra tsara sy zava-mitranga isan'andro izay ataontsika an-tsakany sy an-davany mandra-pialantsika azy ho tanjona tsy mora tratrarina.
Ianao dia manana ny instagram hanaraka ny asany y ny tranonkalanao manokana izay ahitany asa bebe kokoa an'ny mpanao sary velona izay isan'andro isan'andro, ny vadiny sy ny zanany vavy, ary ny iPad izay mamela azy hanao asa tena miavaka. Sary velona, ​​vaovao ary akaiky.
Mandao anao izahay miaraka amin'i Carmen sy ny 87 taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny freshness sy ny loko an'ny sary nataon'i Pascal Campion